अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपालीको र’गत बगाउदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? भन्नुहुन्छ…हेर्नुहोस!
अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपालीको र’गत बगाउदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
डा. प्रेमसिंह बस्न्यात (पूर्वसैनिक जनरल)
केही मित्रहरुले मलाई अमेरिकि एमसिसिबाट कती पैसा खाइस र चुप लागेर बसिस भन्ने प्रश्न राख्नु भयो पनि। म कातिक २९ गते बाट माघ १ गते सम्म देश भित्र र बाहिर समेत् प्राज्ञीक भ्रमण् गर्ने काममा थिय। वास्तवमा सो अबधिमा मलाई कुनै खबर हेर्ने पढ्ने फुर्सद भएन। यद्दपी एमसिसिप्रति मेरो भनाइ निम्न छन :
१) यसलाई अमेरिकाले आइपिएस हो भनेर घोषणा गरेर फेरी होइन भन्दा , फेरी हो भन्ने ,फेरी होइन भन्ने अनी अमेरिकि दुताबासले भिभिन्न संचार माध्यामबाट बढो सस्तो पाराले यस्लाई हाल प्रचार गरी रहेको अवस्थामा ” दाल मा कुछ काला है ? ” भन्ने ठाउँ छ। म यस्लाई संकाको दृष्‍टिले हेर्छु।
२) मलाई राम्रो थाहा छ, यस्तै बिकासे कुरा देखाएर अमेरिकाले हतियार, गोलाबारुद सहित अमेरिकाको कोलाराडोमा तालिम प्राप्त तिब्बती खम्पाहरुलाई मुस्ताङ – मनाङमा तैनाती गराएर चाइनाबिरुद्ध हमला गराउने काम गर्दा नेपाल चाइना सम्बन्धमा ठुलो समस्या आयो। झन्डै चाइनाले नेपालमा सेना परिचालन् गर्न खोजेको। तर, नेपाली सेनाले नै खम्पाहरुको समस्या निराकण गर्‍यो।
३) किन अमेरिकाले मनाङ , मुस्ताङ, नाम्चे र उत्तरि ईलाकालाई मात्र नियन्त्रण लिन खोजेको ? त्यो क्षेत्रलाई किन माया गरेको ?४) संसारभरी रहेको राजनैतीक गडबडि , का’टामार , आ’तंक र राज्य परिवर्तनको दुखेसो कारिब ८० प्रतिसत अमेरिकालाई नै जान्छ। कसैले बुच न पचाए हुन्छ। नेपाली माटो प्रयोग गरी चाइना र भारतलाई ठीक पार्ने ” प्ल्याटफर्म ” को रुपमा नेपाल बन्दैन भन्ने कुनै आधार छन त ?
५) एमसिसिको कर्मचारीहरुमा अमेरिकि सेना छिर्दैनन भन्ने आधार के त ?६) चाइना र भारतको बढ्दो बिकासलाई बाधा पुराउने अस्त्रको रुपमा नेपाली भुमी प्रयोग नहोला भन्ने आधार के त ?७) सन १९५० मा नेपालले सन्धि गरेर भारतीय गुलामी भित्र्यार्यो अब सन २०२० मा अमेरिकि गुलामी मात्र होइन नियन्त्रन नै स्विकार्दैन भन्ने आधार के त ?
८) नजिर र प्रमाणको आधारमा नेपालले ५० मिलियन डलरको साथमा नेपालीको रगत बग्नेछ , भबिस्यमा – सैनिकबम गो’लाबा’रुद र युद्धस्थलबाट नेपालअर्को अफ्गानिस्तान बन्दैन भन्ने आधार के त ?९) अरु समस्यामा चुइक्क नबोल्ने नेपाली सेनाका रितायर्ड ठुलाबडाहरु अहिले एम सि सि को पक्षमा गीत गाई रहेका छन। कृपया राष्ट्रिय सुरक्षा लाई ख्याल गरेर बोल्नु होला। तपाईं हरुको ब्यक्तिगत सम्बन्ध जे होस् अमेरिका सँग तर यसमा नेपाली सेनाको छबी पनि गासिन्छ। म पनि अमेरिकाको बिरोधि होइन तर नेपालको पक्षमा अडिने व्यक्ति हुँ।
एमसिसि लिने हो भने :
१) सर्तहरु नेपाल कै हुनु पर्छ ।२) चाइना र भारत दुबै छिमेकिहरुलाई विश्वाशमा लियर मात्रा काम गर्नु पर्छ ।
३) साम्सदबाट अनुमोदन हुनु हुन्न। यो मन्त्रिस्तरिय सम्झौता हुनु पर्छ।४) अमेरिकि सैन्य रणनिती भित्र छैन भन्ने कुरा अमेरिकि बिदेस मन्त्रालयले नेपाललाई औपचारिक रुपले लेख्नु पर्छ ।
५) एमसिसिले चाइना र भारत दुवै बिरुद्ध प्रयोग हुन्न भनेर सर्त गर्नु पर्छ।
अन्तमा, एमसिसि र बिआरआईको जूङाको लडाईंले गर्दा नेपाल चेपुवामा परेको हो। यस्तो घिनलाग्दो अन्तर्राष्ट्रिय लडाईंमा फस्नु भन्दा एमसिसि र बिआईआर दुबैलाई नेपाल सरकारले त्याग्नु पर्छ। तीनका दान नभएर कुनै नेपाली मर्दैनन।अमेरिकाले नेपाललाई ठुलो सहयोग गर्दै आएको पक्कै हो। तर, नेपाल जस्तो गरीब देशलाई अप्ठेरोमा पारेर घाटी समाउने काम चाइना र अमेरिका दुबैले नगरुन।